अस्पतलाले भन्यो : प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ | Rato Kalam
अस्पतलाले भन्यो : प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शनिबार तेस्रोपटक हेमोडायलासिस गरिएको छ । ग्रान्डी अन्तराष्ट्रिय अस्पतालमा प्रधानमन्त्रीको हेमोडायलासिस गरिएको हो । यसअघि दुई पटक ओलीले मिर्गौलाको हेमोडायलाइसिस गराएका थिए ।
र, यो पनि : थप उपचार गर्न प्रधानमन्त्री अमेरिका जाने,चीन र भारतले पनि राखेका थिए प्रस्ताव
अस्पताललो हेमोडायलासिस सकिएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वास्थ्य अवस्था राम्रो रहेको जनाएको छ । नीजि चिकित्सक दिव्या सिंह शाह, ग्रान्डीका मेडिकल डाइरेक्टर डा. चक्रराज पाण्डे तथा अस्पतालकै युरोलोजी तथा ट्रान्सप्लान्ट सर्जिकल विभागका अध्यक्ष प्राडा. प्रेमराज ज्ञवालीले जारी गरेका छन् ।
१२ वर्षअघि भारतको नयाँ दिल्लीमा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि भदौमा सिंगापुरमा गराएका थिए । अहिले फेरि ओलीको स्वास्थ्य अवस्थामा समस्या आएको छ । पुनः मिगौला प्रत्यारोपण या नियमित हेमोडायासिस गर्न चिकित्सकहरुले बुझाव दिएका छन् । के गर्ने भन्ने ओलीले निर्णय गरेका छैनन् । अब ओलीको उपचार अमेरिकमा गर्ने पनि बुझिएको छ ।
कठिन परिस्थिति माझ पुर्बेकी चेली मेचु भ्वाइसको १० मा पुग्न सफल